Kenya Airways waxay qorsheyneysaa inay dib u bilowdo duulimaadyadii rakaabka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya Airways waxay qorsheyneysaa inay dib u bilowdo duulimaadyadii rakaabka
Kenya Airways waxay qorsheyneysaa inay dib u bilowdo duulimaadyadii rakaabka
Kenya Airways ayaa qorshaynaysa inay dib u bilawdo duulimaadyada rakaab isla marka ay dawladdu qaaddo xayiraadda safarka ee lagu soo rogay duullimaadyada caalamiga ah 22-ka Maarso, taas oo soo afjaraysa bilooyin dakhli lumay sababo la xiriira cudurka COVID-19.
Xayiraadda ayaa si rasmi ah u jaray qulqulka dakhliyada cusub ee Kenya Airways waqti aan lahayn wax dakhli ah.
Waxaa la rajeynayaa in safarka hawada uu si buuxda u shaqeyndoono rubuc-sanadka saddexaad ee sanadka.
Shirkadda duulista ayaa u aragta tallaabada mid ugu wanaagsan xaalada laakiin waxay ka digayaan in mudada ugu dambeysa ee hakinta ganacsiga duulista aan wali la hubin.
Sida ay sheegtay KQ warbixintiisii ​​ugu dambeysay, “Waxaa jira rajo macquul ah oo ah in duulimaadyadu ay dib u bilaaban karaan rubuc-saddexaad ee sanadka iyadoo ganacsiga la filayo inuu ku soo bilowdo mid aad u hooseeya iyo tartiib tartiib tartiib ah, oo ay saameyn ku yeelatay kor u qaadida tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib , kalsoonida rakaabka ee aan la hubin iyo talaabooyinka badbaadada caafimaad. ”
Wadahadallada lala yeelanayo daneeyayaasha warshadaha ee muhiimka ah ayaa socda iyadoo la xiriira dib-u-noqosho aamin ah oo lagu sameeyo jidadka rakaabka, diyaaradda ayaa leh.
Waxaa la rajaynayaa in KQ ay awood u yeelato inay ku daboosho qiimaheeda kala duwan marka ay dib u bilaabeyso.
Dib u soo celinta ayaa la rajaynayaa in ay dhacdo inta lagu gudajiray istiraatiijiyaddii horey loogala xaajoon jiray deyn qaatayaasha iyo deyn bixiyeyaasha sidaasna ay ugu ogolaaneyso in shirkadda duulimaadku ay dib ugu soo laabato saldhiggeedii dakhliga oo ay si tartiib tartiib ah u daboosho kharashaadka go’an,
Shirkadda duullimaadyada waxay ka shaqeynaysay oo keliya duulimaadyo xamuul oo loogu talagalay adeegyada daruuriga ah sida daawada laakiin kuma filna inay sii waddo ganacsiga maadaama ay horay u ahayd dhul lumis ka hor intaanu dhicin cudurka faafa ee coronavirus.
Madaxa Maamulka Sare ee KQ Allan Kilavuka ayaa ku guuldareystay inuu dalbado damiin lacageed oo ka socota xafiiska Maaliyadda Qaranka si uu uga caawiyo buuxinta qarashyada dayactirka diyaaradaha, saldhigyada iyo xallinta biilasha tamarta sida amniga, korontada iyo biyaha.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa Sabtidii si taxaddar leh u wajahay cudurka faafa, isagoo ka digaya talaabooyinka nasashada sida bandowga iyo xakameynta gobollada qaar boqolkiiba 20 ay horseedi doonaan 200,000 infekshin iyo 30,000 oo dhimasho ah marka la gaaro Diseembar.
Previous articleSenator Mwaura oo lagu sharfay dagaalka lagula jiro xuquuqda caruurta nugul
Next articleAfrika oo la xaqiijiyey in kiisaska ‘Covid-19’ ay ka kor u dhaafeen 250,000 oo kiis
Ayax Badan oo Baabiiyay Dhul Daaqsimeedka Degmadda Dhoqoshay
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Booqday Ciidamo Loo Diyaarinayo Howl-gallada Argagaxisada+sawiro